Macluumaadka iyo Talooyinka Shirkadda Nevis LLC Offshore Shirkadda Xasilaadda Xaddidan
A Nevis LLC aad u weyn ilaalinta hantida faa'iidooyinka Haddaba, aynu si toos ah u leenahay dhibicda oo ka hadalno 10 faa'iidooyinka Nevis LLC. Marka hore waxaan eegeynaa faa'iidooyinka. Ka dib, waxaad ka heli doontaa sharraxaad faahfaahsan ee shey kasta. Waxaan ka wada hadli doonaa furitaanka a xisaabta bangiga oo kala hadal amarka amarka ilaalinta.
Saadaasha 10 ee Nevis LLC
CEO (bidix) oo leh Vance Amory, hogaanka Nevis (midig)
Nevis LLC waxay bixisaa ilaalinta hantida ee labadaba xubnood hal xubin shirkadaha. Taasi waa, waxay ka ilaalisaa xubnaha inay ka lumiyaan shirkadahooda ama hantida gudahooda ka yimaada dacwadaha shakhsi ahaaneed. Tan waxaa lagu magacaabaa "amar bixinta amarka". (Tani ma aha kiiska kaliya ee xubin ka mid ah US LLCs ee 47 ee 50 ayaa sheegaya, qoraalkani.)
Mid waa inuu soo dhejiyaa a bond Maxkamadaha Nevis ka hor inta aan dacwad loo gudbin Nevis LLC. Bixintaani waxay ahayd $ 100,000 iyadoo la adeegsanayo 2015 wax kasta oo qaddarin ah oo ay maxkamaddu go'aan ka gaarto 2018 (oo ay ku jirto, laakiin aan ku xaddidnayn, ka badan $ 100,000).
Kala wareegidda hantida Nevis LLC ma kicineyso canshuurta cawaaqibyada la xidhiidha noocyada kale duwan ee shirkadaha offshore. Tani waa sababta oo ah LLC waa guud ahaan canshuur dhexdhexaad ah halka canshuurta ay ku socoto shirkadda xubnaha.
Waxaa jira laba sano xeerka xaddidaadda ku saabsan gudbinta khayaanada ka dib hantida waxaa lagu meeleeyaa gudaha gudaha Nevis LLC. Sidaa darteed, ka dib waqtigaan, maxkamaduhu waxay diidi doonaan inay maqlaan kiis iyaga oo ujeedkoodu yahay in lagu eedeeyo danta xubinta.
Xitaa haddii dayn-bixiyuhu garaaco xeerka xaddidaadda, caddayn ka baxsan shaki macquul ah waxaa looga baahan yahay in Nevis lagu eedeeyo wareejin been abuur ah. (Tani waa tallaabo sharci ah oo aad u sareysa.)
Ma jiro xaddid ku saabsan tirada xubnuhu mid ku dari karo LLC.
Maxkamadeynta bangiyada Maraykanka ayaa guud ahaan awoodi kari waaya hantida Nevis LLC marka habboon si habeysan (oo ka duwan US LLCs).
Si ka duwan US LLCs, Maxkamadaha Nevis ma ogola in la mamnuuco danta xubinta shirkadda.
Waxaa jira hab lagu bixinayo liis gareyn raasumaalka lahaanshaha ee shirkad LLC ah. Taasi waa, qof kale (lamaanaha ama carruurta, tusaale ahaan) waxay heli karaan xubin ka ah ururka Lacagta Joogtada ah ee LLC xubin ka noqoshada kirada.
Maxkamadaha Mareykanka waxay si joogto ah u xukumaan in maxkamadaha ay shirkadu ahayd sameeyay halkii ay ka heli lahayd xubnihii JSL ku nool waa in uu fasiraa heshiisyada shirkadaha. Tani waxaa ka mid ah heshiisyada hawlgallada, iyo bedelida danaha xubinnimada kor ku xusan.
Maamulaheena (bidix) oo leh Mark Brantley, Premier ee Nevis (midig)
Nevis LLC Sharciyada
A Nevis LLC waa shirkad xaddidan oo xadidan oo hoos imanaysa sharciyadii laga qaaday jasiiradda Caribbean ee Nevis. Nevis wuxuu qawaaniinta Qodobada Joogtada ah ee 1995 u sameeyey 2015 wuxuuna wax ka beddelay 1300, isagoo sii wanaajinaya sifooyinka ilaalinta hantida. Jasiiradda Nevis waxay ka kooban tahay qaybta Federaalka ee Saint Kitts iyo Nevis. Waxay ku taallaa 300 koonfur bari ee Florida iyo ku dhawaad ​​1984 bari bari ee Puerto Rico. Waxay leedahay, tan iyo markii XNUMX markii dawladdu hirgalisay Sharciga Ganacsiga Nevis Ganacsiga, waxay isu kicisay nafteeda hanti badbaado.
Dhisidda hay'ad degaanka ah ee LLC waxay bixin kartaa lakab dheeraad ah oo ka mid ah ilaalinta hantida ee US LLCs. Hantida waxaa ugu wacan xisaab shisheeye oo ku qoran magaca shirkada. Tani waa sababta oo ah hantidaasi waxay ka baxsan tahay meelo ka mid ah maxkamadaha Mareykanka. Qaar ka mid ah xeerarka ajnabiga ah waxay leeyihiin qawaaniinta LLC ee bixiya difaac ka sareeya qiimaha sare marka loo eego qawaaniinta Maraykanka.
Jasiiradda Nevis, gaar ahaan, waxay soo saartey LLC wanaagsan sharciyada ee 1995. Qof Maraykan ah, marka loo eego, wuxuu isticmaali karaa a Nevis LLC iyo koontada bangiyada badda ama koontada maalgashiga habka lagu caawinayo ilaalinta miisaaniyada dacwadaha gudaha. Haddii kale, mid ayaa adeegsan kara shirkadda si ay ganacsi uga dhex shaqeyso Mareykanka. Sameynta kan dambe waa arrin samaysa shirkad, ka dibna lagu xareynayo waraaqaha aqoonsiga shisheeye ee gobolka oo uu rabo inuu shaqeeyo.
Xukuumaddu waxay u baahan tahay inay siiso oggolaansho gaar ah shirkadaha leh erayada qaarkood. Ereyada xaddidan ee magaca shirkadda waxaa ka mid ah waxyaabahan soo socda: Ceymiska, Bankiga, Dhismaha Dhismaha, Rugta Ganacsiga, Sharciga, Iskaashatada, Sanduuqa, Imperial, Caymiska, Maalgelinta, Amaahda, Degmada, Royal, ama Jaamacadda.
Wax ka bedelida 2015
Baarlamaanka Nevis wuxuu wax ka bedelay Sharciga 2015, taas oo kordhisay faa'idooyinka ilaalinta hantida ee Nevis LLC. Ugu horreyntii, Nevis waxay u oggolaataa shirkadaha keliya ee xaddidan ee ka midka ah ilaalinta shakhsiyaadka badan ee xubin ka ah, oo ka duwan inta badan dalalka Mareykanka. Taas ayaa ah, sharciga Nevis wuxuu dejiyaa amar amar lagu soo oogo oo ah deyn bixiyaha gaarka ah ee deynta si uu u weeraro danaha lahaanshaha ee lahaanshaha Nevis LLC formation xitaa shirkada LLC waxaa kaliya oo leh hal qof. Taasi waa, qof garsoore ka ah mulkiilaha Nevis LLC ma qaadan karo LLC ama hantida gudaha.
Waxtarrada Sharciga Maraykanka
Hase ahaatee, haddii qof Maraykan ah ama shirkad uu leeyahay amarka amar bixinta, qofka haysta amar bixinta waxa laga rabaa inuu bixiyo canshuurta qaybta ka mid ah faa'iidada xubin ka mid ah shirkadda gudaheeda haddii ay helaan qaybinta ama maaha (Rev. Rul. 77- 137). Tani waa sababta qofka xaq u leh inuu helo qaybinta waa qofka ka masuulka ah biilka canshuurta, haddii faa'iidada dhabta ah la qaybiyo ama aan la bixin. Hal mar, haa, kii kugu dacweeyay ayaa hadda masuul ka ah bixinta biilka canshuurta Nevis LLC, xitaa haddii aad go'aansatid inaadan u kala qaybin shirkaddaada. Amar bixinta amarka ee Nevis ayaa dhacaya ka dib saddex sano kadib oo aan dib loo cusbooneysiin karin.
Nevis Hotel Grounds (Dhammaan sawirada marka laga reebo maabka ay qaadeen kooxdayada maamulka.)
Ka shaqee Nevis LLC
Hantidhawrka muwaadinka Mareykanka ee ku wareejinaya jaamicad kale oo ka tirsan JSL ma kicin cawaaqib canshuur oo caadi ahaan lala xiriirin lahaa hantida kale ee noocyada kale ee hay'adaha dibadda. Nevis ma aqoonsana xukunka ajnabiga ah. Maareynta Nevis xafiiskeena waa ogyahay in kiis laga yaabo in dayn-bixiyaha Maraykanku uusan weligiis helin amar amar lagu dalbado maxkamad Nevis ah si ay ugu oggolaato inay fuliso xukunka Mareykanka.
Xitaa way ka fiican tahay. 2015 wax-ka-beddelka ayaa hoos u dhigtay xadaynta khatarta xadidaadda Nevis ilaa laba sano oo kaliya. Taas macneheedu waxa weeye, markaad hantida u wareejiso Nevis LLC, labo sano ka dib maxakamadu way diidi doonaan in ay maqlaan kiiska. Xitaa ka sii fiican, dayn-bixiyuhu waa inuu caddeeyaa shaki macquul ah oo uu ku leeyahay inuu hantida u wareejiyo Nevis LLC si uu u diido ama u daahiyo deynta. Ku wargalinta maxkamadaha in aad si fudud u dhaqaajisay hantida Nevis LLC si ay u kala duwo caalamku waxay ku shubi kartaa shaki macquul ah oo ka dhan ah eedaymaha wareejinta khayaanadda si ay u ilaaliyaan deyn-bixiyayaasha. Waxaa intaa dheer, isbedelka 2015 wuxuu sameeyaa dayn-bixiye boosto $ 100,000 US bond ka hor inta aan la xareynin dukumiintiyada sharciga si uu u dhaqan-galiyo xukunka ka dhanka ah xubin ka tirsan Nevis LLC. 2018, xukuumadda Nevis ayaa tallaabadeeda sii waday, waxayna u ogolaatay Maxkamadda Sare ee Nevis in ay dhigto xaddiga deynta xitaa ka saraysa (ama ka hooseeya) $ 100,000 US.
Ilaalinta Maxkamadaha Mareykanka
Dhinaca kale, maxkamadaha Mareykanka waxay si joogta ah u haystaan ​​in deyn bixiyeyaashu ay daneeyn karaan dulsaar bixiyaha shirkad Maraykan ah oo US ah iyada oo loo marayo dacwad maxkamadeed oo gobolka Mareykanka ah. US LLCs waxay leeyihiin habka amar bixinta amar bixinta iyo sidoo kale. Si kastaba ha ahaatee, Maxkamadaha Mareykanka ayaa si joogto ah u jebiya ilaalinta ay bixiso qawaaniinta USCO. Ma aha in Nevis.
Sidee ayey tani caawineysaa maxkamada Mareykanka? Wax ka beddelaad dheeraad ah oo laga sameeyay 2015 ilaa qawaaniinta Nevis LLC ayaa faa'iido weyn u leh in lagu difaaco hantida lagu hayo weerarrada maxakamadaha Mareykanka. Qodobka 2015 ee qawaaniinta Nevis LLC waxaa ku jira xubno ilaaliya shuruudaha ilaaliya amar bixinta danta shirkadda. Xiisada xubinta waxaa laga yaabaa in laga helo xubnaha kale ee Joogtada ah ee aan haysan liistadooda xubinimadooda. Tusaale ahaan, aynu u maleyno in shirkad uu leeyahay ninka, xaaskiisa iyo laba carruur ah. Aabaha wuxuu garsoorka ka soo horjeedaa danta gaarka ah ee shirkadda LLC wuxuu helayaa amar amar ah. Xaaska ama caruurtu waxay ku heli karaan xiisaha uu u leeyahay LLC-ga oo bilaash ah amarka amarka. Haddii kale, wuxuu kexeyn karaa dulsaarkiisa gaarka ah ee shirkadda LLC iyadoo leh hantida kale, oo ay ku jiraan hantida aan laga dhaafin deyn bixiyeyaasha.
Waxaa intaa dheer, sharciyada cusubi waxay bixiyaan xitaa haddii xubin uu leeyahay amar bixinta, wuxuu wali ku dari karaa suuq dheeraad ah. Waxaa intaa dheer, haddii ay jiraan laba xubnood ama ka badan, xubinta xor u ah inay samayso qaybinta waa ay sameyn kartaa iyada oo aan loo baahnayn in loo qaybiyo xubnaha loo xilsaaray ee keeni kara qabashada qaybta qaybinta.
Labada xaaladood ee hore waa inay sameeyaan shaqooyinka gudaha gudaha ee shirkadda iyo xubnaha. Dhamaan xeerarka Mareykanka oo idil, arrimaha la xariira arrimaha arrimaha gudaha iyo kuwa ka tirsan xubnaha JSL waxaa lagu xakameynayaa awoodda ay ku xiran tahay halka uu qofku sameeyay oo aanu ku jirin halka xubno ama milkiilayaashu ay ku nool yihiin.
Naadiga Beerta ee Nisbet
Maamulka Nevis LLC
Qof Maraykan ah oo u shaqeynaya Nevis LLC ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu sameeyo sahlan, hal mar oo filim ah Foomka IRS ee 8832. Hase yeeshee, marka la eego, US LLC xubin ka ah oo keliya ayaa helaya mulkiilaha ganacsadaha ah ama "canshuuraha aan la isku diidin" canshuur bixinta iyo xubno badan oo xubno ka ah LLCs ayaa canshuur looga dhigayaa, iskaashatada jasiiradaha waxay u baahan yihiin inay xareeyaan 8832. Sidan oo kale, LLC Nevis waxaa loo tixgeliyaa canshuur dhexdhexaad ah waana inaan wax saameyn ah ku laheyn canshuurta Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, markaa ma aragno inaan bixinayno talada canshuurta, waxaannu kugula talinaynaa la-tashiga CPA oo khibrad u leh dhismayaasha qulqulka.
Muuqaal kale oo wanaagsan oo ka mid ah Nevis LLC ayaa ah in xubnaha ama maamulayaasha aysan qasab ku ahayn inay ku noolaadaan Nevis. Tusaale ahaan, maamulaha Nevis LLC wuxuu noqon karaa xubin wuxuuna sidoo kale noqon karaa deyn lagu xukumo naftiisa. Qofkaas waxaa laga yaabaa inuu ku noolaado Units States ama gobol kale oo caalami ah. Haddii qof uu leeyahay xukun, qofkaasi wuxuu yeelan karaa xaddi badan oo ah koontaroolidda Nevis LLC, kaas oo hanti ku yeelan kara waddan kasta. Nevis LLC waxaay hayn kartaa hantida Maraykanka, Nevis ama meel kasta oo kale. Nevis LLC waxaa laga yaabaa inay koontada bangiga ku leedahay California, Nevis, Switzerland ama meelo kale.
Maamulaha Nevis LLC
Halka ay tahay suurto gal, ma ahan ugu fiican laga soo bilaabo dhinaca ilaalinta hantida haddii deynta xukunka ay sidoo kale tahay maamulaha nevis LLC. Waxaa ka fiican in la magacaabo maamulaha ku nool meel ka baxsan Mareykanka. Maadaama maxkamadaha Mareykanka aysan haysanin awood ay leeyihiin maamulayaasha jasiiradaha dhulka, garsoorka Mareykanku si guul ah uma dhaqan gelin karo amarka qofka ajnabiga ah si uu dib ugu celiyo lacagta Mareykanka. Sidaa daraadeed, heshiiska hawlgalka si sax ah loo maareeyo ma ogalaan doono bixiyaha xukunka inuu ka saaro maamulaha ajnabiga, haddii kale garsoorka Mareykanka ayaa dalban kara inuu sidaas sameeyo. Ururka Nevis waa hay'ad shati leh oo shirkad ceymis ah oo ku xiran danta macaamiisha. Sidaas darteed, haddii hantida ay haysato 100% fursad ay ku qaadaan dayn-bixiye haddii ay ku sii jiraan US, laba doorasho ayaa maskaxda ku hayaan.
Mid ka mid ah ikhtiyaarka ayaa ah inaan waxba samayn oo qofna ha qabsado hantidaada aadka u shaqeysay. Xulashada laba waa inay si ku meel gaar ah u yeelato shirkad ay qaadato xukunkii soo maray iyada oo loo marayo jadwalka aasaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah helitaanka liisanka Nevis oo ficiladiisa ay taageerayaan shirkad caymis. Muuqaalkee ayaa ah muxuu kaaga muuqdaa mid aad u fiican? Kuwa aan ku kalsoonayn saaxiibada ama xubnaha qoyskooda ee ku nool dibedda, waxaa jira shirkado aad u ammaan leh, mudo dheer oo waligood ah oo aan waligood qaateen lacag macmiil ah oo aad u sii wadi karto macalimiinta bilowga ah ama maamulayaasha guusha ku ilaalin kara marka "wax xun "Ayaa dhacaya.
Saxeexa Daanyeerka Dalku, Charlestown
Trust + LLC = Badbaadinta Hantida ee Aasaasiga ah
Nidaamka badbaadinta hantida kama dambaysta ah wuxuu ku lug leeyahay kalsooni ilaalinta hantida ee Nevis ama qawaaniinta ugu caansan ee jasiiradaha Cook. Heshiiskan, hay'adaha dibadda waxay leeyihiin dhammaan danaha xubinnimada ee Nevis LLC. Macmiilka (iyo / ama xaaskiisa ama xaaskiisa) waa ka-faa'iideystaha aamminaadda waana maamulaha Nevis LLC. Nevis LLC, hadana, waxay leedahay hal ama dhowr xisaabood oo bangi ah. Macmiilku waa saxiixa xisaabta bangiga. Marka wax xun xun dhaco, wakiilka kalsoonida wuxuu u kicin karaa macalinka LLC, isagoo macmiilka ku dhejinaya meel aan macquul ahayn haddii garsooraha maxalliga ah uu amro inuu dib u soo celiyo lacagta. Ma jiro "khayaamo been abuur ah" marka hantida maamuluhu is bedelayaan sababtoo ah ma jiraan wax hantid ah oo la wareejiyay. Kaliya booska shirkadda isbeddelka.
Maareynteenu waxay arkeen daanyeerkani oo wadada u dhow kaas oo u dhow calaamada oo sawiray sawirkan.
Markaad dooranayso wakiil, waa muhiim inaad hubiso in ay tahay qof aad ku kalsoon tahay. Haddii wakiilka uu haysto liisanka Nevis ama jasiiradaha Kukiyada waxaad ku kalsoonaan kartaa in dawladdu ay baadhitaan ku samaysay taariikhda asaasiga ah saraakiisha, agaasimayaasha iyo milkiilayaasha. Intaa waxaa dheer, shirkadaha kalsoonida si joogto ah ayaa loo hubiyaa oo ay u eegaan nidaamiyeyaashooda degaanka. Sababtoo ah lacag badan oo ka mid ah dakhliga ka soo baxa sharciyadani waxay ka yimaadaan warshadaha adeegga dibadda, wadamadani waxay u shaqeeyaan si aad u adag si ay u ilaaliyaan sumcaddooda xukunkooda. Dhinaca kale, waxaad ogaan doontaa in shirkadaha maareynta dhulka dibedda ay kuula socdaan baaritaan taariikhi ah oo aad u faahfaahsan adiga oo ka badan intaad adigu doonaysid. Waxay doonayaan in ay hubiyaan inay ganacsi la sameynayaan shakhsiyaadka sumcad leh oo la shaqeeya ilo sharci oo lacag ah. Joogitaanka liisankooda waxay ku xiran yihiin.
Nevis Afar Soodejin Ah
Ilaalinta Xaalad Degdeg ah
Waxa aad ka heli karto waa markaad leedahay xaalad deg-deg ah oo aad ubaahan tahay inaad bixiso adeeg bixiyaha Nevis LLC inuu yimaado samatabbixinta, iyagu si toos ah uma maamulaan hantidaada. Sida koontada maalgelinta maaraynta ee Maraykanka, waxay u xilsaaraan xirfad maalgashi shirkad lacag maamul ah si ay ugu maalgashadaan lacagtaada, iyada oo la socota hagistaada. Sidaas darteed haddii aad u baahatid in aad leedahay talaabo wakiil oo ah maamulahaaga Nevis LLC, waxay u shaqaaleeyaan maamulaha maalgelinta bangiga ee Switzerland, tusaale ahaan inaad xakamayso maalgalintaada. Shirkadda maalgashiga ayaa sida caadiga ah kula soo xiriiri doonta, waxay soo jeedineysaa faylalka, ka dibna raadi talooyinkaaga.
Marka, sida xisaabaadka Mareykanka ee la maareynayo, waxaad u sheegtaa maamulaha in uu ogaado dulqaadkaaga khatarta ah isla markaana hay'addu waxay la imaan doontaa qorshe aad adigu ku ogolaato gudaha Nevis LLC. Sidaas awgeed waxaad dooran kartaa miisaaniyada ku haboon ee saamiyada, dhumucda, biraha qaaliga ah iyo / ama maalgashiga dulsaarka si ay u daboolaan heerkaaga raaxada. Xaaladda Switzerland, bangiga ka soo jeeda xukunkan ayaa inta badan u duulaya si uu ula kulmo adiga shakhsi ahaan marka uu joogo agagaarka booqanaya macaamiisha kale. Waxaad heli doontaa shabakadda internetka ee xisaabtaada si aad u hubiso maalgalintaada. Waxa kale oo laga yaabaa in aad ka hesho akhbaar waraaqeed iyo caddeyn maalgalin oo laga helo xisaabtaada Nevis LLC haddii aad codsato.
Faa'iidooyinka Nevis LLC
Waxaa jira Nevis LLC badan faa'iidooyinka, oo ay ku jiraan kuwa soo socda:
Ka dhaafida canshuurta Nevis
Nidaamka bilowga ah ee dayactirka iyo dayactirka sanadlaha ah
Waxaa lagu dhisi karaa saacadaha 24
Wuxuu ganacsi ka sameyn karaa Maraykanka ama meel kale oo xukun ah.
Uma baahna raasamaal lacag ah
Shirkadda waxaa laga ilaaliyaa inay qabato qadarin xukun
Hantida gudaha ee shirkadda waxaa laga ilaaliyaa xukun ka soo horjeeda xubin.
LLC-ka xubnuhu waa sharci
LLC-ka xubnuhu waxay helayaan isla hal-dhaqaale hantiyeed oo ah xubno badan oo xubno ka ah LLCs
Xubnaha (milkiilayaasha) iyo maamulayaasha (kuwa maamula shirkada) laguma diiwaangeliyo diiwaanada dadweynaha
Maamulaha shirkadda LLC wuxuu xakameyn karaa 100% ee shirkadda
Maamulaha looma baahna inuu noqdo milkiile laakiin wuxuu xakameyn karaa 100% ee shirkadda iyo hantida.
Qof ama qof ka socda waddan kasta wuxuu noqon karaa maamulaha ama xubin.
Ma jiraan wax xakameyn sarrifka ajnabiga ah
Waxay la midoobi kartaa LLC-ga ka soo jeeda qawaaniin kale
Shirkad Maraykan ah ama LLC ah ayaa u beddeli kara inay noqoto shirkad Nevis LLC ah
Nevis LLC waxaa lagu abuuray shirkad Nevis Limited Limited Responsible Ordinance 1995 iyo wax laga bedelay 2015. Xeerarka waxaa markii hore lagu saleeyey qawaaniinta shirkadaha ee gobolka Maraykanka ee Delaware.
Shirkadda Nevis Limited Liability Company (Beddelidda), Sharciga 2015 ("Sharciga") waxaa la soo saaray July 1, 2015. Waxa jiray laba dib-u-habayn oo lagu horumariyo hantida. Ugu horreyntii, waxaa jiray dib-u-soo-celin ku saabsan qaybta ka hadlaysa amar bixinta amarrada. Marka labaad, waxaa jiray qayb cusub oo lagu daray wareejinta been-abuurka ah.
Beddelka ugu weyn ee qaybta amar bixinta waa in amarka amar bixinta uu yahay xalka keliya ee lagu heli karo deymanka xukun kasta (oo uu ku jiro wakiilka bangiga). Taasi waa haddii Nevis LLC leeyahay kaliya hal ama xubno badan, maxkamadaha Nevis ma oggolaan doonaan inay qabsadaan LLC ama hantida lagu qabto. Intaa waxaa dheer, amar bixinta looma oggola in lagu daro xaddi ka soo baxa ganaaxyada, ganaaxyada ama magdhawga ciqaabta.
Amarka amar ku bixinta ee ka dhanka ah Nevis LLC looma tixgelinayo deyman ku saabsan danta xubinta ee shirkadda. Qofka leh amarka amar-bixinta qasab maaha inuu ku boodo oo uu noqdo xubin, sidaas darteed milkiilaha asalka ahi wuxuu lahaanayaa lahaanshihiisa. Ma awoodaan inay jimicsadaan xuquuqda xubin kasta. Qofka haysta amarku ma faragalin karo go'aamada maamulka. Intaa waxa dheer, ma awoodi karayaan ama ma qabsan karaan hantida shirkadda. Ma xakameyn karaan hawlaha shirkada. Intaa waxaa dheer, ma awoodi karaan in ay burburiyaan hay'adda.
Bixinta Amar Dhamaadkii 3 Years
Marka loo eego xukunka Mareykanka ee caadiyan u socota sanadaha 10 ee sanadlaha 10 ee sanadlaha 20), Nevis LLC amarka dib u cusbooneysiinta looma cusbooneysiin karo waana in uu dhacaa saddex sano kadib (3) kadib markii la xareeyey. Waxaa intaa dheer, shirkadu waxay sii wadi kartaa inay raadiso maalgalin dheeraad ah oo ka timaada xubnaheeda waxayna ku hayn kartaa qaybinta kuwaas oo inta badan la aadi lahaa xubinta eedaysanaha.
Qeybta 43A, bayaanka cusub ayaa lagu daray in loola dhaqmo wareejin been abuur ah Shirkadda. ThWaa qaybta cinwaanada deyn bixiyeyaasha ee isku dayaya in ay qabtaan hantida uu deyn bixiyuhu u gudbiyay shirkadda. Qaadashada sharciga ka dib Nevis iyo Cook Islands, qaybtan waxay sheegaysaa in dayn bixiyuhu u baahan yahay inuu caddeeyo shaki macquul ah oo ah in sababta wareejinta ay ahayd inuu khayaamo deyntaas gaarka ah iyo in xubinta, sidaas awgeed, lagu dhameeyey khilaaf. Intaa waxaa dheer, xisaabinta waxaa ka mid ah qiimaha suuqa oo dhan ee danta xubinta ee LLC. Sidaa darteed, haddii qiimaha suuq geynta hantida xubnahu ay ka weyn tahay inta codsadaha deyn bixiyaha marka la wareejiyo, maxkamadahu ma tixgelinayaan bedelaadda lagu sameeyay khiyaano.
View of Nevis ka Badda Caribbean
Haddii aan macaamilka ku yiraahdo, "Haa, anigu waxaan haysanayaa hantidayda shirkadda Nevis LLC si ay uga fogaato Mr. Credit Cards," waxayna bixisaa sabab kale oo sharci ah oo loogu talagalay dhaqaajinta lacagta, sharuudda macquulka ah ee ku filan waa inay ku filnaadaan in laga hortago amar amar ah oo ka dhan ah LLC. Xitaa haddii dayn-bixiye uu ku amarto amar ku amraya LLC, sharciyadu waxay si aan macquul ahayn uga dhigan tahay helitaanka hantida shirkadda.
Qofka ugu dhakhsaha badan wuxuu hanti u yeelaa Nevis LLC. Sababta ayaa ah in ay jirto laba sano oo ah xaddidaad ku saabsan dayn-bixiyeyaashu inay soo gudbiyaan codsi ka dhan ah danta xubinta. Xataa xannuun badan oo loogu talagalay qofkii dacwad soo oogay, dayn-bixiye waxaa looga baahan yahay inuu boostada ($ 100,000, tusaale ahaan) u dhigto lacagta caddaanka ah ee hore ee maxkamada ka hor inta aan la diiwaangelin. Sidaa daraadeed, qawaaniinta Nevis LLC waxaa lagu daraa caqabado badan si looga hortago deynta si ay u helaan hantida xubnaha.